Etu aga - esi bulie ndi na - ege ntị ntị ma nweta nzaghachi | Martech Zone
Mepụta uzu gburugburu azụmahịa ma mee ka ndị na-ege gị ntị nwere mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị bụ nzọụkwụ mbụ iji wuo obodo na-eguzosi ike n'ihe. N'ime oge dị mkpirikpi, nke a nwere ike ibute ụba ahịa na ahịa. N'ime ogologo oge, nke a nwere ike ịmepụta otu ndị nnọchi anya ndị nnọchi anya ọrụ nke na-arụ ọrụ dị ka otu ndị ahịa ahịa ahịa okpuru. Ebe ọ bụ na imeri obi nke igwe mmadụ gị dabere na itinye aka na ndị na-ege ntị, ọ dị mkpa iji rụọ ọrụ nke ọma itinye aka ma nweta nzaghachi. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ga-enyere gị aka ịkụtu ya ma mee ka azụmahịa gị nwee ọganiihu.
Kpọọ ka emee
Oge ụfọdụ, mmadụ niile na - achọ ịhe ngụgụ na aghụghọ aghụghọ iji nweta mkpali. N'ihi ya, ịghọta ike nke ịkpọ oku iji mee ihe na itinye ha n'ọrụ nwere ike melite njikọta ngwa ngwa ngwa ngwa. Mgbe ị na -emepụta ọdịnaya ahịa, ọ dị mkpa iji nnukwu ọrụ rụọ ọrụ gị site na itinye ụfọdụ ụdị oku iji mee ka ndị na-ege gị ntị were nzọụkwụ ọzọ. Nke a nwere ike ịza ajụjụ na njedebe nke blọọgụ iji kpalite mkparịta ụka ma ọ bụ mee ka ndị ọbịa bịanye aka na ya ozi email ya mere ị nwere ike ịme mmekọrịta chiri anya.
Mgbe ị na-eji oku na-eme ihe, ọ dị mkpa itinye ya n'ọnọdụ ziri ezi ma mee ka ọ gbasoo usoro ezi uche dị na ya. N'ọtụtụ ọnọdụ, a ga-etinye ya na njedebe nke ọdịnaya mgbe ị nyechara uru na / ma ọ bụ zaa ajụjụ. Mgbe ị nwapụtasịrị onwe gị ịbụ onye nwere ọgụgụ isi na ntụkwasị obi, ndị na-ege gị ntị kwesịrị inwe ahụ iru ala karịa itinye aka na ya. Nke a bụ oge zuru oke iji tinye oku iji mee ka ndị mmadụ nwee mmekọrịta na ọkwa ụfọdụ.
Agbanyeghị na ụwa na azụmaahịa abụrụla nke akpaghị aka na ndị anaghị ahaziri onwe ha n'oge ndị a, ọtụtụ mmadụ ka na-enwe mmetụ mmadụ aka. N'agbanyeghị otu anyị si wee baawanye na teknụzụ, ezigbo azụmaahịa na-adaberekarị na mmekọrịta na imepụta njikọ na ndị ahịa. Ọ bụ ya mere ikwe ka ụdị mmadụ gị na-enwu site na ọdịnaya gị na ịbụ ezigbo mmadụ bara uru. Kama ịnọ na ndò, ọ kacha mma ka ị na-eme ka ndị ọzọ mara gị ma mee ka ha mata gị nke ọma. Enwere ike ime nke a n'ọtụtụ ụzọ:
Iji ụda enyi mgbe ị na-eke ọdịnaya
Izere oke okwu dị mgbagwoju anya nke ndị na-ege gị ntị nwere ike ghara ịghọta
Gbalị ịghara ịbịa dị ka ihe ngosi
Ngwa ngwa ịza ajụjụ na ajụjụ
Zụlite ụdị pụrụ iche nke dị iche na ndị asọmpi
I nwekwara ike itinye foto ole na ole nke gị na ndị otu egwuregwu na-eme ihe na-abụghị azụmaahịa gị. Site na ime ka ndi na ege gi mara gi nke oma karia, ime ka ndi mmadu nwee mmekorita kwesiri easierdi nro karie ma itinye aka kwesiri ka o bawanye.
Nwee ebe niile
na 56 percent nke ndị mmadụ nọ n'ụwa na-eji ụdị ụfọdụ nke mgbasa ozi mmekọrịta, ọ dịbeghị mfe ka ịnweta ya. Site na ime ka odimma gi di nma ichota ahia gi ma dikwa gi nma, inwere ike ime ka ha na ha na emekorita. Enwere ike imezu nke a site na ịchụ onye nwere ọgụgụ isi mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi na iji saịtị di iche iche. Nọ n'ọtụtụ saịtị dị mkpa n'ihi na ọ na-enye gị ohere iru pasent kasịnụ nke ndị na-ege gị ntị. Nke a na-ehiwe netwọk maka ọnụọgụ ntanetị niile metụtara ntanetị na-enyere aka maka ịme akara. Ma ọ bụghị ya, ijide naanị otu netwọk ma ọ bụ abụọ nwere ike ibelata mmetụta na njikọ gị.
Mgbe ibido, ọtụtụ azụmaahịa na-amalite site na nhọrọ ndị ezi uche dị na ya ma mepụta profaịlụ na Facebook na Twitter. Y’oburu n’inwe netinyere ndi okacha ahia ozo, LinkedIn na Google+ bara uru. Maka oyiyi centric marketing, Pinterest, Instagram na Tumblr bụ ezigbo nhọrọ. Youtube zuru oke maka ijikọta vidiyo. Enwekwara ebe ndokwa maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị ka Reddit, Stumbleupon na Digg nwere ike iburu ya ọbụna otu nzọ ụkwụ.
Mee ka ndị na-ege gị ntị rụọ ọrụ
Havemụ mmadụ nwere ọchịchọ ebumpụta ụwa nke ịbụ ndị a gụnyere, ya mere, itinye isi n'ọchịchọ a nwere ike ịba uru. Iji maa atụ, ịgba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha kọwaa ihe ị na-ede na blọọgụ ma bido ịkparịta ụka nwere ike ime ka ha nwee ihe ịga nke ọma. Ime otú ahụ na-egbu nnụnụ abụọ na otu nkume n’ihi na ọ na-enye gị ohere iso ndị na-agụ akwụkwọ gị na ndị na-agụ akwụkwọ gị na-emekọrịta ihe. N'otu oge ahụ, ọ bụ ụzọ zuru oke iji nweta nzaghachi bara uru.
Maka azụmaahịa dabere na ngwaahịa, ị nwere ike ịjụ ndị ahịa ka ha zipụ foto nke ha site na iji ngwaahịa ahụ ma tinye ya na weebụsaịtị gị ma ọ bụ profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta. Echiche ọzọ bụ ịnwe asọmpi ebe onye mmeri na-enweta ego, dere ma ọ bụ ngwaahịa n'efu. Onye nwe ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ nwere ike ịjụ ndị na-eso ụzọ Facebook ka ha nye echiche maka ụdị eji megharịa ọnụ. Onye ọ bụla nyere echiche ahụ a họọrọ ga-enweta ihe nrite n'efu.
Iji gbochie ajọ mmejọ ma tinye azụmahịa gị n'okporo ụzọ na-aga nke ọma, ọ dị mkpa ka ị na-anata echiche na-enweghị isi site na ndị na-ege gị ntị. Ọ bụ ezie na ọ naghị adịcha ụtọ ịnụ okwu na-adịghị mma, nkatọ na-aba uru nwere ike ịgwa gị ihe ndị i kwesịrị ime mgbanwe. N'aka nke ọzọ, okwu dị mma ga-egosi gị ihe ị na-eme nke ọma ka ị nwee ike itucha ma megharịa ya. Lee ụfọdụ echiche iji nweta nzaghachi.
Igbe nzaghachi ma ọ bụ Mpempe akwụkwọ
Nke a bụ ma eleghị anya nhọrọ kachasị dị mfe ma zuru oke maka ịchọta ebe nsogbu dị. Maka ndị ọrụ WordPress, enwere ọtụtụ plugins dịnụ nke ga-etinye ngwa ngwa igbe ma ọ bụ ụdị nzaghachi. Dịka, a ga-etinye ha na sidebar dị ka wijetị ma ọ bụ dị ka ibe mmadụ n'okpuru isiokwu nke weebụsaịtị. Fọdụ na-ekwe ka nkọwa dị mfe, ndị ọzọ na-adịkarị mgbagwoju anya ma na-ekwe ka ndị na-ege gị ntị kwuo ogo njirisi azụmahịa gị.
Nyocha bụ ụzọ dị mma iji chọpụta afọ ojuju nke ndị na-ege gị ntị na ndị ahịa gị. Ha bụkwa otu n'ime ụzọ kachasị mfe iji chọpụta usoro dị mma na nke na-adịghị mma. Site n'iji ikpo okwu dika Nnyocha anụ, ị nwere ike ịmepụta nyocha ndị akọwapụtara maka azụmahịa gị. Mgbe ịmechara nyocha, ntuli aka ma ọ bụ ajụjụ ọnụ, enwere ike zigara ndị na-ege gị ntị site na email, Twitter, kọntaktị ndị ahịa, wdg. dị mfe na-enweghị ihe karịrị 10 ajụjụ. Ọ bụ ezie, dị ka KISSmetrics, ezigbo nyocha nwere naanị ajụjụ ise. N'ihi ya, ọ bụ ihe amamihe ịjụ naanị ajụjụ ndị dị mkpa ndị mmadụ nwere ike mejupụta ngwa ngwa.
N'ikpeazụ, iji usoro ihe omimi maka ịtụle omume ndị na-ege ntị nwere ike inye gị ihe ọmụma bara uru. Uzo ikpo okwu maka otutu ulo oru bu Google Analytics n'ihi na ọ bụ free, mfe iji na nnọọ saa mbara.
Ọ na-egosiputa ọtụtụ data gụnyere asụsụ onye ọrụ na ọnọdụ ya, isi mmalite okporo ụzọ, ogologo oge ndị ọrụ na-anọ na saịtị gị yana ngwaọrụ ndị na-ege gị ntị na-eji iji nweta ọdịnaya. O nwekwara peji peji nchịkọta nke ahụ na-egosi akụkụ nke weebụsaịtị na-enweta ọtụtụ clicks.
Amamihe azụmahịa na nkwakọba data bụ mpaghara abụọ na-adịwanye mkpa, yana. Nakọta na nyochaa data nzaghachi ndị ahịa (yana omume onye ọrụ, ịpị data, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ) dị mkpa maka ịmata nsogbu na ohere, wee nwee nnukwu ego na ha.
N'ihe banyere SEO, Nchịkọta Google na-enye ndepụta nke isiokwu nke ndị ọrụ abanyela iji chọta ọdịnaya gị. Ihe ikpo okwu a na-agbajikwa ọdịnaya ọdịnaya nke ọ bụla ka ị wee mara ọkwa ndị na-enweta ọtụtụ echiche. Site na ijikọ data niile a, ị nwere ike nweta nzaghachi doro anya iji nyere aka na ịmepụta ọdịnaya na ahịa n'ọdịnihu.
Tags: mmepe ndị na-ege ntịSocial Media Marketing
Jun 6, 2013 na 7:58 AM
iji ngosiputa di elu maka inyocha akparamagwa agwa ndi mmadu nwere ike inye gi mmuta bara uru.